Wonke amantombazane aphupha ngokuba nenqaba yawo, ngisho noma encane futhi engekho yangempela, kodwa kuyokwazi ukufaka udonsa ozithandayo. Yenza ikhosakho yakho injabulo - yenza izindlu zokupaka ezihle kakhulu ngezandla zakho. Ngaphambi kokuzindla ngombuzo wendlela yokwenza u- Barbie indlu, khuluma nomntwana, thola ukuthi uyayibona kanjani. Mhlawumbe, ingane yakho izohlela ishalofu ekamelweni noma ibhokisi elikhulu lekhadibhodi, elihlomele le njongo, noma mhlawumbe liphupha legodlo elikhulu igumbi lesigamu? Noma yini ayifunayo, ungakhathazeki - isihloko sethu sizokusiza ukuthi ufunde indlela yokwenza u-Barbie indlu ngezandla zakho. Ngakho, ake siqale!
Indlela yokwenza indlu kaBarbie. Ukulungiswa kwesakhiwo
Ngenxa yalezi zinhloso, i-polystyrene foam ekhishwayo yiyona engcono kakhulu. Ukusuka kuwo ungakwazi kalula ukusika izindonga zesayizi esifanele, iwindi kanye nokuvula iminyango. Ngesikhathi esifanayo, kunamandla okwanele ukulwa nesakhiwo se-3-4-storey. Futhi le ndaba ifanele ukuphahla kwendlu ezayo. Uma ufuna ukwakha isakhiwo esincane, ungasebenzisa amabhokisi amakhadibhodi ngaphansi kwezicathulo.
Ngakho-ke, uma usenqume ukuyeka kokuqala kokuqukethwe, khona-ke udinga amashidi we-polystyrene ngobukhulu be-120x60 no-2cm obukhulu. Lokhu kuzoba ngaphezu kokwanele indlu ka-3-4-storey. Uma udonsa wendodakazi yakho izohlela indawo yokuhlala e-storey, khona-ke ungathatha ubukhulu bamakhomitha wendaba. Ukuze ulungise ngokuqinile izindonga zibe yisakhiwo esisodwa, uzodinga ama-toothpicks kanye ne-adhesive ethembekile (okuhamba phambili kufanelekile i-polystyrene foam ekhethekile).
Manje siqhubeka nokuhlaziywa ngqo kombuzo wokuthi singayenza kanjani indlu kaBarbie. Dala udonga, izansi kanye nezindiza ezivela kuzinto ezikhethiwe, nqamula amafasitela neminyango ezindaweni ezifanele. Manje faka izindonga kanye nama-toothpicks bese ubamba kanje: grease ne-glue, unamathela engxenyeni ye-toothpick, ingxenye yesibili yabo ingena kwenye ishidi. Hlanganisa yonke indlu ngale ndlela. Njengoba usungule ifreyimu, ungathola ukuthi ungayenza kanjani indlu kaBarbie, kodwa lokhu akuyona yonke into.
Ngakho-ke, ukwakha okuqinile kwakhiwe, kodwa kanjani ukwenza indlu kaBarbie ethobekile? Kubaluleke kakhulu ukukhombisa umcabango wakho, akekho olinganisa. Glue wallpaper colorful odongeni, futhi uphonsa imicu phansi efanisa isitayela ikamelo ngalinye, ukukhanya LED ukukhanyisa endlini ukuze kube mnyama ukudlala kusihlwa, thunga amakhetheni amancane kumafasitela, uhlele ifenisha.
Kokunye okufana nokwakhiwa kwendlu, ungakha uphahla. Yenza konke kube mnandi, kusebenze futhi kujabulise, njengendlu yangempela.
Manje usufunde ukwenza indlu kaBarbie ngokwakho futhi ngaphandle kokuthola ubunzima obukhulu. Qinisekisa ukuthi ukudlala nedonsa yakho oyintandokazi kule ndlu enhle kuyoletha ingane yakho injabulo enkulu nenjabulo! Uma uthanda ukwakha indlu yephola, zama ukuhlola ifenisha, izingubo nezicathulo. Qiniseka ukuthi uhilela indodakazi yakho njengomsizi. Uzoba nesithakazelo kakhulu ekufundeni ukwenza izicathulo zeBarbie.
Isihlungi esingezansi somthombo ngezandla zakho: incazelo, imiyalelo, imidwebo nezibuyekezo